सम्पादकीय : स्वास्थ्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि छानबिन होस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २०, २०७६ सम्पादकीय
काठमाडौँ — बजार भाउभन्दा निकै बढी मूल्यमा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याएपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता त बुधबार रद्द गरेको छ, तर यति गरेर मात्र भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुने प्रकृतिको निर्णय गर्नेहरुले छुट पाउनु हुँदैन ।
यसमा पहिलो जवाफदेही स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल हुनुपर्छ, जसले किन यति अनियमित ढंगले कारोबार गर्न छुट दिए भन्ने कुरा खोजिनुपर्छ । दोस्रो जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको हो, जसले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई उक्त कारोबार अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पोखरेल नौजना मन्त्रीहरु सम्मिलित ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’का संयोजक हुन् भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल त्यही समन्वय समितिअन्तर्गत रहेको औषधी खरिद उपसमितिका संयोजक ।
यसबाहेक सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका अन्य को–को पदाधिकारी एवम् राजनीतिक व्यक्तिहरु यस प्रकरणमा संलग्न छन्, उनीहरु सबैलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । यसका निम्ति प्रथमतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले आफ्ना आँखा खोल्नुपर्छ । उनले यो प्रकरणको साँच्चै छानवीन गर्न चाहने हो भने देखिहाल्नेछन्– आफैंनजीकका को–को व्यक्ति भाइरसका बेला भ्रष्टाचारको जाल बिछ्याउन लागिपरेका छन् ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किनेर ल्याउने नाममा गरिएको यो विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा बद्नियतपूर्ण देखिने आधार प्रशस्त छन् । पहिलो, सरकारले यो सम्झौता नियमित रुपमा अघि बढेको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर ‘विषम परिस्थिति’ देखाई सोझै गरेको थियो । चीनबाट अन्य मुलुकमा समेत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले केही मेडिकल सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सात दिनको म्याद राखेर फागुन ३० गते बोलपत्र आहृवान गर्दा त्यसमा १९ वटा आपूर्तिकर्ताले भाग लिएका थिए ।
‘लकडाउन’ को एक–दुई दिनअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले व्यवसायीसँग खरिदबारे छलफल पनि गरेको थियो । पछि, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ११ गते बसेको बैठकले २४ घण्टाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नू भनेर निर्देशन दिएपछि एक्कासी अर्को खरिद प्रक्रिया थालिएको हो । यहाँ उक्त बोलपत्र रद्द गरिनुको आधार र औचित्य स्थापित गरिएकै छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद रद्द गर्ने प्रक्रियाको पालना गरिएको छैन ।
दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रस्ताव पेस गर्ने १९ कम्पनीको सूचीमा ओम्नी छँदै थिएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको कुनै अनुभव र पृष्ठभूमि नभएको यो कम्पनीसँग आधार र औचित्यबिनै सम्झौता गरिएको थियो, त्यो पनि यति संवदेनशील अवस्थामा । स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डर रद्द भएपछि मुलुकभर लकडाउनको निर्णयपश्चात कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले छिटोछरितो रुपमा औषधि र सामान आपूर्तिको निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिदका लागि सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायीहरूसित यसो छलफल गरेजस्तो औपचारिकतामात्र निर्वाह गरेर रातारात ओम्नी समूहसँग खरिद सम्झौता गरेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूसितको उक्त छलफलमा पनि ओम्नीका प्रतिनिधि थिएनन् । विशेष परिस्थितिमा पनि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको पूर्वयोग्यता, क्षमता अध्ययनबिनै सामग्री ल्याउन दिन मिल्ने छुट सरकारलाई हुँदैन ।
साथै, सरकारले एउटा कम्पनीलाई एक लाख डलरभन्दा माथि रकम भुक्तानी गर्न नदिएको र त्यसभन्दा बढी भुक्तानी गर्न सामान आएको बिलबिजकहरू पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा ओम्नीले भने सहजतासाथ आपूर्ति गर्न सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीका लागि सरकारबाटै विशेष सहुलियत पाएको आशंका पनि गरिएको छ । र, सामान आपूर्तिको तुलनामा ठूलो रकम ढुवानीमा खर्च गरिएको छ, कतै चीनले दिएको अनुदानको सामानसमेत लिन सेवा विभागका अधिकारीहरू चीन पुगेकाले चार्टरको पूरै शुल्क नेपाली व्यवसायीले नतिर्ने ‘मिलेमतो’ त छैन भन्ने आशंका पनि यहाँ उब्जिएको छ । यी सबै सवालले यो निर्णय लिनेहरुको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ उव्जेको छ ।
कोभिड–१९ रोकथामका लागि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री बन्दोबस्त गर्न समय छँदा निकै आलटाल गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियतमाथि उतिबेलैदेखि शंका गर्नेहरू धेरै थिए । सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्ने गरी अनुपर्युक्त सामग्री खरिद गरिएको घटनाक्रम र त्यसका लागि अपनाइएको विवादास्पद प्रक्रियाले अहिले त्यस्तो आशंकामा बल पुर्‍याएको छ । यस प्रकरणपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्री भानुभक्त ढकालले यतिञ्जेल पाइरहेको ‘शंकाको सुविधा’ को हक अब गुमाएका छन् । यो सबै घटनाक्रमको पहिलो जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाबाट आवश्यक तयारी भएर महानिर्देशकको निर्णयबाट टुंगिनुपर्ने खरिद प्रक्रिया यसपटक ‘विशेष परिस्थिति’ देखाई मन्त्रीको अग्रसरतामा भएको थियो । सम्झौताका क्रममा भएको गलत क्रियाकलाप र राज्यकोषमा नोक्सानी परेको यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ । अरु सामान्य अवस्थामा जस्तो यो कुनै कर्मचारी तहबाट मात्र भएको वा हुनसक्ने घटना होइन । यसको अर्थ यसमा कर्मचारी तहको संलग्नता छ भने तिनले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर अहिले कोभिड–१९ प्रकोपका बेला राजनीतिक तहबाट सक्षम नेतृत्व दिनुपर्ने व्यक्ति नै अनियमित कारोबारको केन्द्रमा मुछिएका छन् ।
यो प्रकरणको भोली राम्रोसँग अनुसन्धान भएमा कसुरका आधारमा कानुन आकर्षित हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल अनियमिततामा जिम्मेवार ठहरिएलान् वा नठहरिएलान्, त्यो अर्कै कुरा भयो । तर, आज उनका निम्ति यो नैतिक जिम्मेवारीको विषय बनिसकेको छ । यस प्रकरणमा देखाएको असक्षमताका कारण पनि अब उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न लायक देखिएनन् । त्यसैले उनी स्वयंले पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ नत्र प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेर यो संकटको घडीमा अन्य कोही सक्षम व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
यस प्रकरणमा आफूभन्दा माथि कुनै अमुक व्यक्तिको भूमिका र दबाब थियो भने पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले त्यसलाई सार्वजनिक गरेर राष्ट्रप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । खासगरी यस मामिलामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई किन यो खरिद प्रक्रिया यसरी विवादास्पद ढंगबाट अगाडि बढाउन सल्लाह एवम् निर्देशन दिए भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसैले यस मामिलामा उनलाई पनि छानवीनको दायरामा ल्याइनु पर्छ । गलत मनसायका साथ राज्यकोषमा नोक्सान हुनेगरी निर्णय गरेका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि छानवीन एवम् कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत हच्किनु हुन्न ।
तर त्यसभन्दा पहिले आफ्नो नाकैमुनि गडबडी गर्ने मन्त्री एवम् पदाधिकारीहरुको पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री चुक्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले संकटका बेला देखिएको यो घिनलाग्दो अनियमितताका सबै पर्दा खोल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ । यति संवदनशील घडीमा भइरहेका तर नहुनुपर्ने यी घटनाक्रमप्रति मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले देखेको नदेखेझैं गर्ने हो भने मुलुकमा ठूलो निराशा र आक्रोश फैलनेछ ।
तसर्थ, अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद मामिलामा एकपछि अर्को गरी आइरहेका विवादास्पद घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो तहबाट सुरुवाती छानवीन थाल्न जरुरी छ । किनभने अहिले जुन बेला छ, जस्तो ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यो समयमा कुनै भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने भोलि संवैधानिक संस्थाहरूले हेरिहाल्छन् नि भनेर चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन । किनभने अहिले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्ने किसिमले काममा ढिलासुस्तीमात्र भइरहेको छैन, तिनमा अनियमितता पनि देखिन थालेको छ । र, यो सबैमा पैसाको मात्र प्रसंग छैन, जनस्वास्थ्यको विषय पनि जोडिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख कार्यकारी तहबाट कुनै सुनुवाई नहुने हो भने शंकाको सुई सोझै आफैंतर्फ पनि सोझिन्छ भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १३:४५
चैत्र २०, २०७६ प्रा. नोवल किशोर राई
काठमाडौँ — हाम्रो नेपाल सरकारले ‘लकडाउन’ को घोषणा गर्न अघि नै चैत ३ गतेका दिन हाम्रा छोरीहरू नुमा र निनाम्माले हामीलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’का निम्ति घरबाट कतै नगई ‘सोसल डिस्ट्यान्स’ गर्ने सल्लाह दिएका थिए ।
उनीहरूको आमालाई कस्तो लाग्यो कुन्नि मलाई भने ‘म किन हाउस एरेस्ट भएर बस्ने ?’ भन्ने जस्तो अहम जागेर आयो । देशबाहिर रहेका आफूभन्दा अलि ज्यादै संसार बुझेका छोरीहरूसँग भाइबरमा निक्कैबेर वादविवाद चल्यो । आखिरमा मैले नै ‘मिड प्याक’ गर्न कर लाग्यो । मैले फेरि सम्झें यो काम त उनीहरूको लागि भन्दा पनि आफ्नै लागि हो भन्ने ठानें अनि मानें पनि । तसर्थ म चैत ३ गतेदेखि नै कडा लकडाउनमा बसेको छु ।
अझ मैले यसो पनि ठानें, समयमा हाम्रो देशका केही असल नेताहरू पनि नजरबन्द र जेल–नेलमा बसेका हुन् । आजभोलि जेसो गरे पनि म्यान्मारकी नेता आङसाङ सुकी र दक्षिण अफ्रिकी प्रिय नेता नेल्सन मण्डेलाहरू त कति कठोर जेल–नेल भोगेर आएका हुन् नि । म त आफ्नै लागि त्यो पनि केही हप्ता वा महिनाका निम्ति किन अटेर गर्ने ? किन यो पहेंलो पातलाई हावाहुरीबाट नबचाउने ? भन्ने ज्ञान फुर्‍यो । त्यस दिनदेखि मैले आफ्नो आँगनको गेटको फाटक खोलेर बाहिर पाइला हालेकै छैन । धन्यवाद छोरीहरू । आमा पापाको भलाइका निम्ति तिमीहरूको सल्लाह, अनुरोध, (आदेश ?) भनेर खुशी छु म ।
आज यसो पछाडि फर्केर हेर्नलाग्दा दुई साताभन्दा ज्यादा भए म यसरी बसेको । यी दिनहरूमा घोत्लिएर बस्दा मेरा मानसपटलमा छल्किएका छालहरूलाई कोर्ने धृष्टता गरेको छु । अनेक छालहरूमा यो ‘होम क्वारेन्टाइन’ ले दिएका फाइदा र नोक्सानीलाई यसरी कोर्ने काम गरेको छु ।
१) मैले यो कामले ‘कोरोना भाइरस’ आफू र अरूलाई सारेको छैन ।
२) लखरलखर सहर चहारेर फोहर फैलाउने काम पनि गरेको छैन ।
३) काम बेकाममा गल्ली र गल्छेडो नापेर मैले आफ्नो गोजी दुलो पनि पारेको छैन ।
४) बाल्यकाल (विद्यार्थी अवस्था), गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम नाघ्नै लागेको यो अवस्थामा आफ्नो घरमा यति व्यवस्थित र अनुशासित भएर अविछिन्न रूपमा पहिले कहिल्यै बसेको थिइन, यसै पाली हो । पक्कै पनि मेरो ‘होम मिनिस्टर’लाई खुसी लागेको हुनुपर्छ । हाम्रो बिहा भएकै बेला पो किन ‘लकडाउन’ भएन भनेर पनि सोच्न पुग्छु । भरखरै बिहा भएका र ससुराली नभएका युवाहरूलाई छड्के सलामका साथ बधाई !
५) परिवारमा सँगै बस्ने र सँगै खाने पिउने अवसर जुटेको पनि छ । आमाबाबुको माया र छोराछोरीको सेवा प्राप्त भएको यो कस्तो अनुपम संजोग !
६) हरेक सुनौलो बिहानी र रुपौलो साँझतिर आफ्नो घरको छत माथिबाट मातातीर्थ, चन्द्रागिरी र ठूलो हात्तीवनका डाँडाहरू कति सुन्दर, शान्त, स्निग्ध देखिन्छ । कुनै कुनै दिन पानी पर्ने र चैतेहुरी चल्दा यी पहाडहरू भरखरै स्नानगारबाट स्नान गरेर फर्किरहेकी षोडषीजस्तै पनि देखिदा यो अधबैसे मन पनि !
७) अहिले म मेरो आँगनको अम्बकको बोटमुनि बसेर आकाश हेर्दा मेरै पान्थरे–इलामे आकाशजस्तै नीलो–नीलो देख्दा म खुशीले बुरुक्क उफ्रिन्छु । कवि सिद्धिचरणको ‘यो मरूस्थल’बाट यस्तो नीलो आकाश देख्न नपाएको कैयौं वर्ष भएको थियो ।
८) दूरदराजबाट ‘भाग्यको लहरमा लहरी लहरी’ अवसर खोज्दै हिंडेका हामीले यो ‘मण्डला’लाई भारी बोकाएर उकुसमुकुस भई बसेकामध्ये एउटा ठूलै जत्थाले चारभन्ज्याङ नाघेर जाँदा यो उपत्यकाले अलि सजिलै सास फेर्दैछ क्यारे ! सडकमा हल्ला, धुलो, हिलो र भीडभाड छैन । सडक र गल्लीमा तैछाड–मैछाड गर्दै दगुर्ने चक्काहरूले आराम पाउँदा हामीले पनि हाम्रो फोक्सोको सफाइ अनुभव गर्न पुग्छौ ! हाम्रो मुटुको स्पन्दन सुन्न सक्छौं ।
९) आफ्नो पाठ्यक्रमभित्रका पुस्तकहरूमात्र रट्न पर्ने विद्यार्थीहरू नयाँ नयाँ विषयका पुस्तकहरू पढेर ज्ञानको फाँट बढाउन पाउने अवसर हो यो । स्रष्टाहरूले कति नवीन सृजना गर्ने होलान् यो ‘लकडाउन’को बेला !
१०) सहरको कोलाहलबाट गाउँघर पुगेर कतिले बाँझिएको बाँझो फोडेर अन्न लहलह पार्ने अवसर एकातिर छ भने आफन्तहरूलाई भेटेर रमाउन पाउने अवसर पनि त हो । यसअघि दशैमा मात्र यति लामो विदा पाउने थियो नि ।
११) म जस्तो ‘परपरे मुख’ र ‘छुकछुके बानी’ले अलि मौन र शान्त भएर शरीर र मनलाई शुद्ध र स्फूर्त बनाउने अवसर पनि हो है ।
१२) ठूलाले सानालाई हेप्ने होच्याउने गरेकोमा आज ‘कोरोना’ले सबैलाई बराबरको त्रास दिएकाले ठूला साना बीचको भेद कम भएको हो कि त !
१३) हुने खानेले मनपरी अन्नपानी वा अरू उपभोग गरेर लापरबाही गरेर आएको अवस्था कम भए सबै कुरा जतनका साथ उपयोग गर्नुपर्ने बानी बसाल्ने अवस्था आयो ।
१४) आजभन्दा कैयौं वर्ष पहिले नै प्रख्यात अर्थशास्त्री माल्थसले जनसंख्याको नियन्त्रण प्रकृतिले स्वयं गर्दछ ! मान्छेले चिन्ता लिनै पर्दैन भनेर बढ्दो जनसंख्या स्वतः प्रकृतिले घटाउने कुरा बताएका थिए । जसलाई ‘माल्थसको जनसंख्या सम्बन्धि सिद्धान्त’ भनिन्थ्यो । त्यो आज सिद्ध हुन्छ कि भन्न मिल्ला !
अब कोरोनाका कारणबाट बन्द हुँदा नोक्सानी कस्ता कस्ता होलान् त भनी मेरो मनमा उब्जेका तरंगहरू निम्नानुसार कोरेको छु ।
१) प्राकृतिक रचनाहरूबाहेक मानव निर्मित यन्त्रहरूको सञ्चालन, प्रयोग, उपभोग एकदमै कम भएकाले अभाव, असुविधा र अनेक अप्ठ्याराहरू झेल्न परिरहेको छ । रेल, मोटर, हवाई जहाज नचल्नाले कस्तो कठिनाई भोग्न परिरहेको छ ।
२) मानिसले आफ्नो बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक क्षमताका कारण अनेक सुविधाका उपायहरू सृजना गरेकामा अब ती धेरै कुराहरूमा ‘ब्रेक’ लागेर दुर्घटना भएको छ ।
३) कठिनाइ र आपतको यो ठूलो भुँवरीमा हामी व्यक्ति, समाज र देश उस्तैउस्तै प्रकारले होमिएका छौं । ‘बाख्रालाई बाख्राकै सिङ र भैंसीलाई भैंसीकै सिङ भारी’ भनेजस्तो भएको छ ।
४) हामी मान्छे यति स्वार्थी भएका छौं कि आफैंले आफूलाई पुग्ने खानेकुरा र अन्य साधन स्रोत जम्मा गरेर अरूलाई चटक्कै बिर्सेर ‘आफूसुके’ भएका छौं । निर्धा, दुब्ला र गरिब–निमुखाहरू ‘मर्नु न बाँच्नु’ हुन पुगेका छन् । उनीहरूलाई ‘राम भरोसे’ बनाएका छौं ।
५) हाम्रो अज्ञानता, मूर्खता र बडप्पनको स्वभाव सतहमा छर्लङ्ग आएको छ । ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा आफैं बुझेर बस्नु पर्नेमा सरकारले अनुरोध गर्दागर्दै पनि सडकमा बर्दीधारीको ‘गोरू चुटाइ’ खानु परेको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टरले ‘क्वारेन्टाइन’ मा राखेको देख्दा नबुझेर डाक्टरलाई हात हाल्न पुग्ने ‘बलवान पिता’हरू पनि हाम्रै समाजमा रहेछन् । अमुक देशको अमुक कम्पनीको अमुक मालझैं यो कोरोना भाइरस पनि हो भनी ठान्ने कथित नेताहरू पनि रहेछन् । अनि घर बाहिर निस्केकै दोषमा निर्घात कुटेर थला पारेर फेरि अस्पताल पुर्‍याउनु पर्ने सुरक्षाकर्मी पनि देखिए ।
६) धन्सारभरि अन्न थन्काएर वर्षभरि पुर्‍याउने आँगनमा ठूलाठूला थाँक्रा ठड्याएर मकै साँच्ने बानी हराएर छेउकै ढावाबाट मोमो, चाउमिन, थुक्पा र पिज्जामा भर पर्ने दिन पनि गए कि कसो हो जस्तो छ । लसुन, प्याज, बेसार, अदुवा, कागती, टिम्बुर, पुदिना, जरिङ्गो, छ्यापी जस्ता वनस्पतीको सेवन गरेर शरीरको रोग निरोधक क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा ‘वाईवाई र चटपटे’ले भरिएको यो भुँडीले कसरी धान्ला हाम्रो यत्रो शरीर ?
७) अर्थशास्त्री माल्थसले भनेको जनसंख्या नियन्त्रण त कोरोनाले गर्ला तर यो ‘लक डाउन’ अवधिमा चालु हुने युवा समुदायको क्रियाकलापले कति जनसंख्याको वृद्धि गर्ला ? भन्ने कल्पना गर्नु पनि त पर्‍यो होला नि ! ६० वर्षभन्दा माथिका वरिष्ठ नागरिकको जनसंख्या घट्नुभन्दा अबको दश महिनादेखि वर्ष दिन भरिमा धर्ती टेक्ने कनिष्ठ बालकहरूको संख्या पक्कै पनि तेब्बर नहोला भन्न सकिन्न । कुनै समयमा न्यूयोर्क सहरमा एकछिन बिजुली बत्ती नबलेर अँध्यारो हुँदाका बखतमा बढेको जनसंख्याको कुरो पनि सुनेकै त हौं !
८) केही वर्ष अघि देशमा भूकम्प आउने ठूलो हल्ला चलिरहँदा एकजना चङ्खे मित्रले भनेका थिए ‘अब भुइँचालो आउने रे कतिजना मर्ने हुन् ? अनि कतिजना बाँच्ने हौं ?’ भन्नेखाले समावेशी र असमावेशी वाक्य यो प्रकोपमा पनि दोहोरिएला नि !
यो ‘लक डाउन’मा उठेका जोड घटाउका यी लहरहरू यस्तै हुन् । तपाईहरू पनि यस्तो गोरेटेमा हिंडिरहनु भएको भए आ–आफ्नो पोकाहरू खोल्नु भए मिलेर सहयात्रामा रमाइलो नै होला ।
पहेंला पातहरू हावाहुरीबाट जोगिने यत्न गरौं । नयाँ र हरिया पातहरू पनि रूखै ढल्न सक्ने सम्भावनाको याद राख्ने होऔं ।
अन्तमा, मलाई यसो भनुँभनुँ जस्तो लागेको छ– यो कोराना भाइरस अब लगभग संसारका २०२ देशहरूमा फैलिइसकेको छ । यसको विरूद्ध लड्न व्यक्ति–व्यक्ति, परिवार–परिवार, समुदाय–समुदाय अनि सबै राष्ट्रहरू एक लयमा जागरूक, सचेत र सकारात्मक भएर लाग्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ हेर्दा यो महामारीमा हामी आ–आफ्नो पूर्वाग्रह छाडेर ‘वसुधैव कुटुम्बकम’को विचारले माथि उठ्नु पर्छ । सचेत नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको ख्याल राखेर आफू बच्ने अनि अरूलाई बचाउने काम गर्नु पर्‍यो ।
अहिलेलाई ‘नागरिक अधिकार’ बिर्सेर ‘नागरिक कर्तव्य’को सोच राखौं । ‘म कोरोनाबाट अलग हुन्छु र अरूलाई पनि अलग रहन मद्दत गर्छु ।’ भन्ने दृढ संकल्प लिएर काम गर्नु पर्‍यो । किनभने हामी नागरिक नै कर्मचारी हौं, हामी नै व्यापारी हौं र हामी नै सरकार पनि हौं । सबैको कल्याण होस् । सबैको जय होस् ।
राई भाषाशास्त्री तथा जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १३:४२